MOETHIHAAUNG: ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများရဲ့ လားရာ
Written by သည်းထန်
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ ဖွင့်ခွင့်ပေးခဲ့တာ နှစ်နှစ်သက်တမ်းကို ရောက်လာ ခဲ့ပါပြီ။ အစကောင်းလို့ အနှောင်းသေချာနေ တဲ့ ကျောင်းတွေ တွေ့နေရသလို အစမကောင်းတဲ့ ကျောင်းတွေရဲ့သတင်းတွေကို လည်း ကြားနေရပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ အောက်မြင်ဖို့ မအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ အချိန်ကာလ တစ်ခုအထိ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာဖြစ်သလို အစိုးရရဲ့ ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲမှုလည်း လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မိပါ တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ မူဝါဒတစ်ခုပြောင်းလဲတိုင်း ချို့ယွင်းချက်တွေ ပါလာတတ်တာ ထုံးစံတစ်ခုလိုဖြစ် နေပါတယ်။
"ပညာရေးဘွဲ့၊ သင်ကြားမည့်ဘာသာရပ်နှင့် ကိုက်ညီသည့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ ဘာသာ ရပ်ဘွဲ့၊ မဟာဘွဲ့၊ မဟာဘွဲ့အထက် သို့မဟုတ် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံ အနည်း ဆုံး ငါးနှစ်ရှိသူဖြစ်ပါက . . ."
ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင်တော့ အထက်ပါဥပဒေဟာ လက်ရှိ သင်ကြားနေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာ ရာခိုင်နှုန်း ၅၀ လောက်အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုမရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျူရှင်ဆရာတစ်ဖြစ်လဲ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာတွေဟာ သင်ကြားမှု အတွေ့အကြုံ ငါးနှစ်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ သင်ပြ တဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ရတဲ့ ဘွဲ့ကိုက်ညီသည်ဖြစ်စေ၊ မညီသည်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်မှာ သင်ကြား မှုနည်းစနစ်နဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ဖို့ကို ကြိုးစားကြတာချည်းပါပဲ။ သူတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ခန့်ထားကြတဲ့ ဆရာတွေပါ။ ကိုယ်ညံ့ရင်ခံရမယ်ဆိုတာ သိသူချည်းပါပဲ။ မညံ့အောင် ဟုတ်တဲ့နည်း ရော၊ မဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့ပါ ကြိုးစားနေကြသူတွေချည်းပါပဲ။ အဲဒီတော့ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေဟာ စကားလုံးတွေထက်ပိုပြီး အသက်ဝင်မလာခဲ့ပါဘူး။ (ကျူရှင်ဆရာတွေအခေါ်) လုပ်သက်ငါးနှစ်ပြည့် အောင် ပညာရေးမှူးတွေကို ချဉ်းကပ်ကြတယ်။ ရတဲ့ဘွဲ့နဲ့သင်တဲ့ဘာသာရပ်မတူတဲ့သူက ဘာသရပ် တူလိုင်စင်ရပြီး မသင်တဲ့ဆရာရဲ့ သင်တန်းဆရာကတ်ပြားကို တစ်နှစ်စာပိုက်ဆံပေးငှားပြီး ဓာတ်ပုံ ပြောင်းကပ်လို့ ဆက်သင်ကြာတာပါပဲ။ ဥပဒေက မလိမ်ချင်သူကို လိမ်အောင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သလိုပါပဲ။
"အထက်တန်းအဆင့်အတွက် စာသင်ခန်း၏ ကြမ်းခင်းဧရိယာသည် စတုရန်းပေ ၃၆၀ အနည်းဆုံး ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသား ၄၀ ဦးထက်မပိုရ . . ." ဥပဒေမှာပါတဲ့ ဒီတစ်ချက်ကလည်း အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းများမှာ မဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အချက်ကို ပုဂ္ဂလိကတွေဆီက တောင်းယူလိုက် သလိုပါပဲ။ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းများမှာတောင် စတုရန်းပေ ၃၆၀ ထဲမှာ ကျောင်းသား ၆၀ ကျော် ၇၀ သင်ကြားနေကြရတာပါ။
တကယ်တမ်း ဥပဒေထဲမှာပါသင့်တာက ကျောင်းအဆောက်အအုံသည် ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် နှစ်ရှည်ငှားရမ်းထားခြင်းစတဲ့ အချက်တွေပါဝင်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာအိမ်ရှင်အိမ်ငှားပြဿနာကြောင့် နေရာရွှေ့ရတာတို့၊ စစ်ဆေးရေးဝင်ရောက်စဉ်ပြထားတဲ့ အခန်းတွေပြန်ချုံ့ရတာတို့စတဲ့ ပြဿနာတွေ ပြေလည်သွားမှာပါ။
Multimedia Classroom နဲ့ Science Lab
ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန်ပေမယ့် အကောင်အထည်ဖော်ပုံ မှားယွင်းမှုကြောင့် သိန်း ၂၀ ပေးဝယ်ရတဲ့ Language Lab တွေဟာလည်း ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအတွက် အဆောင်အယောင်တစ်ခုထက် မပိုခဲ့ပါ ဘူး။ အစိုးရကျောင်းများရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလိုပဲ ကျောင်းစစ်လာတဲ့နေ့မှာ Language Lab ကို အသုံးပြုပြ၊ ကွန်ပျူတာကိုင်တတ်တဲ့ကလေးကို ကွန်ပျူတာကိုင်ခိုင်းနဲ့ သင့်တော်သလို စခန်းသွားနေ ကြပါတယ်။ တကယ်ဆိုကျောင်းစစ်တွေကို ရှောင်တခင်သာ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ အခြေအနေမှန် တွေသိနိုင်မှာပါ။ သင်ခန်းစာတွေပြီးမပြီး record တွေကြည့်ပြီး စစ်ဆေးနေတာကလဲ ကွယ်ရာမှာရယ်စ ရာတွေ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ record ဆိုတာကြိုက်သလိုလိမ်ပြီး ရေးနေကြတာပါ။ လိမ်မရေးလို့လဲ မဖြစ်ပါဘူး။ ပြဋ္ဌာန်းထဲက သင်ခန်းစာနဲ့ပြီးရမယ့်ကာလဟာ တစ်မြို့နယ်နဲ့တစ်မြို့နယ် မတူနိုင်ပါဘူး။ ကျောင်းသားရဲ့ ဉာဏ်ရည်နဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားနေတာပါပဲ။ ဒါကိုဒီလအတွင်း ဒီသင်ခန်းစာအထိ ပြီးရမယ်ဆိုတော့ လိမ်ကြတော့တာပါပဲ။ တကယ်ဆိုဖြစ်သင့်တာက သင်ချင်သလို သင်၊ ပြီးချင်သလောက်ပြီး၊ ဖြေချင်တဲ့သူဖြေတဲ့အတန်းကို ဝင်ဖြေခိုင်းပြီး စာမေးပွဲစနစ်ကို အစိုးရက တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ်စစ်ဆေးပေးနိုင်ရင် စာပြီးမပြီး record တွေလိုက်စစ်စရာမလိုတော့ပါ ဘူး။ ခုတော့ခုတ်ရာတခြား ရှရာတလွဲတွေဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ဆရာတွေကလဲ သင့်တော်သလိုသင် ကြ၊ အတန်းကိုလဲ တင်ချင်သလိုတင်ကြနဲ့၊ မကြာခင်မှာ ဆယ်တန်းမှာ အရည်အသွေးစံမမီတဲ့ ကလေး တွေ စုပုံလာပါတော့မယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ကလည်း ပိုကောင်းမယ်မျှော်လင့်လို့ပြောင်းမိပါတယ်။ တရုတ်မုန့်တွေစားရသလို ပါကင်လှပြီး အာဟာရမပြည့်ဝရင် ကျောင်းထားရကျိုးမနပ်ပါဘူး။ အချိန်မီ ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။
တည်ထောင်သက် နှစ်နှစ်ပြည့်ခါနီးအထိ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေကို အခွန်မကောက်သေးပါဘူး။ အသေ အချာတွေးကြည့်ရင် ဒါဟာပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအတွက် ရင်မောစရာပါ။ ပြီးမှ ဘက်ပြန် (back) သုံးနှစ်အတွက် ဘယ်လောက်ဆောင်ပါဆိုရင် အပ်နှင့်ထွင်းရမယ့်နေရာ ပေါက်ဆိန်နဲ့ပေါက်နေရပါလိမ့် မယ်။ သာမန်ကျူရှင်တွေကို အခွန်ကောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ အခွန်လွတ်နေတာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးအတွက် မျှမျှတတဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေဘက်ကလည်း အစိုးရရဲ့စေတနာအစစ်အမှန်ကို သိသင့်ပါတယ်။ ငွေရဖို့တစ်ခု တည်းကို မကြည့်သင့်ပါဘူး။ ပညာရေးဟာ စီးပွားရေးမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိရဲ့အလုပ်ဟာ နိုင်ငံရဲ့အနာ ဂတ်ကို ပုံဖော်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အမြဲသတိချပ်နေသင့်ပါတယ်။ တလောဆီက ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတစ်ခုမှာ ကျောင်းသားတွေက စာရင်းသွင်းပြီး လာမတက်ဘဲနေတဲ့ကိစ္စ အတော်ကျယ်ကျယ် လောင်လောင်ကြားရပါတယ်။ လာသင်တဲ့ဆရာတွေကို လစာသုံးလမရှင်းလို့ ဆရာတွေက ဆန္ဒထုတ် ဖော်ကြမယ်ဆိုပြီး ဟာသလုပ်နေတာလဲ ကြားရပါတယ်။ ဆရာတစ်ဦးရဲ့ အဆင်မပြေလို့ နှစ်မကုန်ခင် နောက်ဆရာတစ်ဦးလဲထည့်၊ ထပ်အဆင်မပြေထပ်လဲထည့်လုပ်တဲ့ ခေတ်ကုန်သင့်ပါပြီ။ အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့ ကြလွန်းလို့ ကျူရှင်လောကကြီးလဲ ပျက်စီးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခုတစ်ခါထပ်ဖြစ်နေလို့ တာဝန်ရှိသူတွေ မျက်စိ စပါးမွေးစူးခဲ့ရင် မိမိအတွက်ရော ကျန်တဲ့ဘဝတူတွေအတွက်ပါ ဇာတ်သိမ်းမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ မိမိ ကျောင်းမှာလာတက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ကြံရည်ကြိတ်စက်ထဲက ကြံဖတ်တွေလို သဘောထားပြီး ခေါက်လိုက်ချိုးလိုက် အရည်ညှစ်လိုက်လည်း မလုပ်သင့်တော့ပါဘူး။ တစ်လဘယ်ရွေ့ ဘယ်မျှနဲ့သင် မယ်ပြောပြီး ကျောင်းရောက်ပြီးခါမှ စာအုပ်ဖိုးထပ်ကောက်တာ၊ ဖယ်ရီ ကြေးတွေ ထပ်မြှင့်တာ၊ ဆေးကျောင်းကဂိုက်ကို ခေါ်ပေးရမှာမို့ သင်တန်းကြေးထပ်တိုးတာတွေဟာ အရည်ညှစ်နေတာပါပဲ။ ခြံစည်းရိုးကို ထင်းခွေတဲ့အလုပ်တွေ မလုပ်ကြပါနဲ့တော့။
အိန္ဒိယရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုထဲက ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကလေးတွေကျောင်းလာတက်တာ ကျောပိုး အိတ်တွေ မပါတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင် Lap top လေးတွေနဲ့ ကျောင်းရောက်လာပါတယ်။ ကျောင်းက ဆရာမကလည်း သင်လိုတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို projector နဲ့ရှင်းလင်းသင်ပြသွားပါတယ်။ မရှင်းလင်း တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ၊ အိမ်စာတွေကို လုပ်ဖို့ကလေးတွေက ဆရာမရဲ့ကွန်ပျူတာထဲက လိုချင်တဲ့အပိုင်း တွေကို ကူးယူပြီးအိမ်ပြန်သွားကြပါတယ်။ ကလေးတွေအိမ်ပြန်မရောက်မီ ကလေးတွေရဲ့ အိမ်ကိုက လေးရဲ့ တစ်နေ့တာအကြောင်းအရာအားလုံး e-mail ပို့လိုက်ပါပြီ။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးကို အစိုးရကပဲတွန်းတင်နိုင်မလား၊ ပုဂ္ဂလိ ကပဲ တွန်းတင်နိုင်မလား၊ နှစ်ဦးပေါင်းပဲ တွန်းတင်နိုင်မလားဆိုတာ မျှော်တလင့်လင့်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေ ချင်ပါသေးတယ်။
Posted by Myo Lwin Aung at 7:43 AM